Maksimosy avy any Konstantinopolisy - Wikipedia
I Maksimosy avy any Konstantinopolisy, izay fantatra koa amin'ny anarana hoe Maksimosy Teolojiana na Maksimosy Konfesora, dia monka na moanina sy teolojiana kristiana ary manampahaizana. Tamin'ny voalohany dia mpiasam-panjakana sy mpanampy ny emperora bizantina Herakliosy izy. Nilaozany anefa izany fiainany ara-politika izany fa nilatsaka ho monka izy. Teraka tamin'ny taona 580 i Maksimosy ary maty tamin'ny taona 662. Isan'ireo olona atao hoe Rain'ny Fiangonana izy. Atao hoe Μάξιμος ὁ Ὁμολογητής / Maksimos ó Homologêtếs izy amin'ny teny grika.
I Maksimosy Konfesora
Nifindra tany Kartago ka nandalina ny asa soratry ny filozofa neo-platonisiana maro izy, dia lasa mpanoratra malaza. Rehefa nisy namany iray nandray ny fampianarana kristolojika atao hoe monoteletisma, dia tafiditra tamin'ny fifandirana izy tamin'ny nanohanany ny hevitra kalkedoniana izay mampianatra fa sady manana sitrapon' olombelona i Jesosy no manana sitrapon' Andriamanitra. Nahatonga azy hampijalina sy hisesy tany izany fisainany ny amin'i Kristy izany, dia maty izy fotoana vitsy taorian'izany.
Nohamafisin'ny konsily fahatelo tao Konstantinopolisy anefa ny teolojian'i Maksimosy sady nisaina ho olo-masina izy fotoana fohy taorian'ny nahafatesany. Ny anaram-boninahitra hoe "Konfesora", izany hoe panambara ampahibemaso ny finoana (latina: Confessor fidei), dia midika fa niaritra fijaliana noho ny finoana izy, nefa tsy nahatonga azy ho maty martira izany. Heverina fa ny boky nosoratany atao hoe Fiainan'ny Virjiny no filazana feno ny tantaram-piainan'i Maria renin'i Jesosy.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Maksimosy_avy_any_Konstantinopolisy&oldid=977535"
Dernière modification le 21 Novambra 2019, à 03:38
Voaova farany tamin'ny 21 Novambra 2019 amin'ny 03:38 ity pejy ity.